भाईरल तस्बिर बारे अश्लेषाको स्पष्टिकरण भन्छिन्, मेरो निन्द्रा नै उड्यो - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
यतिबेला सिनेमा ‘प्रेम गीत–२’ को टिम नेपाल टुरमा छ । केही दिन अघि दश दिनको लागि काठमाण्डौ बाहिर गएको ‘प्रेम गीत २’ को टोलीले विभिन्न शहरहरुमा कार्यक्रम देखाएर सिनेमाको प्रमोशन गरिरहेको छ । यहि क्रममा केही दिन अघि नेपालगंजमा भएको कार्यक्रमपछि सिनेमाकी नायिका चर्चा र विवादमा आएकी छिन् । खास कुरा नेपालगंजमा भएको कार्यक्रममा नृत्य गर्ने क्रममा सिनेमाकी नायिका अश्लेषा ठकुरीका केही तस्बिरहरु खिचिए र भाईरल बनाईए । नेपालगंजका लोकल मिडियाहरुले उनका भित्रि बस्त्र बिनाका तस्बिर भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिदिए र अचानक भाईरल बने । आफ्ना अश्लिल तस्बिरहरु भाईरल भएपछि दुखी भएकी अश्लेषाले पहिलो पटक मिडियासँग यस बारेमा कुराकानी गरेकी छिन् । युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालसँगको कुराकानीमा उनले पत्रकारहरुले पत्रकारिताको नैतिकता नै बिर्सेर यस्ता तस्बिहरु भाईरल बनाएको स्पष्ट पारेकी छिन् । सबै पत्रकारहरुले अनुसन्धान नै नगरी मनपरी समाचार बनाएर तस्बिरहरु भाईरल बनाएको उनको भनाई छ ।
यस विषयमा बोल्दै उनले अगाडि थपिन्, ‘शुरुमा मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो । पछि तस्बिरमा पनि विभिन्न किसिमको कमेन्टहरु पनि आए । मलाई सपोर्ट गर्ने केही मिडिया र दर्शकहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । यो देखेर मलाई खुशी लाग्यो । नेपालगन्जको कार्यक्रममा मैले घुँडा सम्मको वानपिस लगाएको थिएँ । नृत्य गर्ने क्रममा पनि मेरो वानपिस माथि सरेको थिएन । अनि अडियन्श र स्टेजको बिचमा १ मिटरको ग्याप पनि थिएन । अडियन्शले टाउको माथी गरेर हामीलाई हेर्नु पथ्र्यो । त्यही समयमा लोकल पत्रकारहरुले लो एंगलबाट मेरो फोटो खिचिदिनु भयो । त्यो पनि यसरी लिनु भयो कि मैले भित्री वस्त्र केही नलगाएको जस्तो देखियो ।
पछि फेसबुकबाटै उहाँहरुले समाचार बनाएर ती तस्बिरहरु भाईरल बनाईदिनु भयो । त्यस माथि पनि उहाँहरुले समाचारका शीर्षकहरु मेरो ईमेजलाई खराब पार्ने गरी अनि प्रेम गीत २ लाई असर पर्ने हेतुले नै राख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई । मेरो डेब्यु सिनेमालाई असर पर्ने गरी उहाँहरुले यो तस्बिर भाईरल बनाउनु भएको छ । त्यसले मलाई एकदमै चित्त दुखेको छ । मैले त्यो वान पिसमा भित्री वस्त्र लगाएको थिएँ । भित्रि बस्त्र बाहिर पनि मैलै सुन्तला रंगको हाप पेन्ट लगाएको थिएँ । अनि ती तस्बिरमा पनि त्यो हाफ पेन्टको कलर रिफलेक्ट भएको छ । तर उहाँहरुले त्यसलाई लुकाउनु भएको छ । यी तस्बिर भाईरल भएपछि मलाई निन्द्रा पनि लागेको छैन । म रातको तीन बजेसम्म बसेर सामाजिक सञ्जालहरु चेक गरिरहेको छु ।
धेरैले सिनेमाको प्रमोशन गर्ने फण्डा भन्नु भएको छ । तर त्यस्तो होईन । यी तस्बिरहरु भाईरल भएपछि मेरो दिमागमा मेरो परिवारलाई र सिनेमालाई कस्तो असर पर्ला ? भन्ने पीर मात्र थियो जुन अझै पनि छ । मैले बुबाको फोन पनि उठाएको छैन । दिदीहरुले पनि अस्ट्रेलियाबाट फोन गर्नु भएको थियो । मैले उहाँहरुको फोन पनि उठाएको छैन ।
खुशी व्यक्त गर्न नाचिएको एउटा नृत्यलाई धेरैले नराम्रो रुपमा लिईदिनु भयो । नेपालगन्जमा भएको त्यो घटना पछि मैले बुटवलमा अडियन्सलाई फेस गर्न पनि सकिन । मैले त्यहाँ केही पनि प्रस्तुत गरिन । मलाई त्यो घटनाले एकदमै असर गरेको छ । म निदाउन पनि सकेको छैन । फोटो भाईरल भएको समयमा मलाई, मेरो यो डेब्यू सिनेमा हो अब के हुने हो ! मेरो निर्माता, निर्देशक र मेरो परिवारले मलाई के भन्ने हो ! भन्ने मात्र परेको थियो, अहिले पनि परेको छ । मलाई यो कुराबाट अघि बढ्न मेरो टिमले भने निकै सपोर्ट गरेको छ । ‘